NoFap.com အဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ် ၁၀ ချက် - သင်၏ Brain On Porn
အကြံဉာဏ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအပိုင်းပိုင်း၏ 10: အ NoFap.com အသင်းထံမှ
တစ်ဦးကပြည့်စုံ reboot လုပ်ပါ အဘို့ရွှေကိုစံတစ်ခုဖြစ်သည် အတိတ်တွင်ညစ်ညမ်းထွက်ခွာ နှင့် Out-of- ထိန်းချုပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းညှိ။ အခုသင်စာရင်းသွင်းပြီးပြီဆိုရင်၊ မင်းအတွက်ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ။ အလေးအနက်ထားပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အီးမေးလ်များကိုပြန်လည်တုန့်ပြန်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
ယခုအပတ် PMO မှထွက်ရန်သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်အကြံဥာဏ်အချို့ပေးပါလိမ့်မည်။
သငျသညျအတိတ်ကာလ PMO စွန့်ခွာချင်အတိအကျအဘယ်ကြောင့်သင်တို့သိကြ၏။
သင်ဘယ်လို NoFap ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလဲ သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပြဿနာအဖြေကိုရှာဖွေခဲ့ကြသလဲ
အဘယ်အရာကို NoFap အကြောင်းသင့်စိတ်ဝင်စား? သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်သင်သည်သင်၏အသက်တာ၌ပြောင်းလဲမှုတချို့မျိုးကိုဖန်တီးရန်မျှော်လင့်ပါတယ်ခဲ့ပါ, sign up ကိုခဲ့တာလဲ
အသက်တာ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုသငျသညျအသကျရှငျဖို့လိုသလဲ သငျသညျယခု မှစ. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်နှစ်ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြဖို့အရေးကြီးနေသည်သလဲ? သငျသညျရေရှည်တည်တံ့အတိတ်ကာလ PMO (ညစ်ညမ်း, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, အော်ဂဇင်ဘို့ငါတို့အတိုကောက်) စွန့်ခွာနိုင်ခဲ့ကြတယ်လျှင်အဘယ်အရာကိုသင်၏အသက်တာကိုကြည့်ကဲ့သို့အလိုတခုတည်း?
သင်တစ်ဦး PMO session တစ်ခုအတွက် partaken ပြီးနောက်သင်မည်သို့ခံစားရသနည်း ကောင်းသော? မကောင်းတဲ့? သင်ဘယ်လိုလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်း, နောက်နေ့ကအကြောင်းခံစားရသလဲ PMO သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုသို့မဟုတ်ပွညျ့စုံ၏ခံစားချက်များကိုမှပံ့ပိုးနေသည်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါသလော
သင်ဘယ်လိုရေရှည်မှာ PMO သက်ရောက်မှုသင်၏အသက်တာထင်ပါသလဲ
ဘယ်လို PMO အတိတ်၌သင်တို့၏အသက်တာကိုထိခိုက်ခဲ့သလဲ
PMO သင့်ရဲ့လူ့သင်၏မိတ်ဆွေများကိုသင်တွေ့ဆုံရန်လူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံရေးကို, မိသားစုဝင်များ, လုပ်ဖော်, အလားအလာမိတ်ဖက်, သင့်သိသာသည်အခြားသို့မဟုတ်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ထိခိုက်သလဲ?
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ခရီး၏အစအဦးများနှင့်အဘယ်ကြောင့်သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုသင်အလှနျအရေးကွီး ရှိ. , နေဆဲဖြစ်ကြောင်းသတိရကူညီရန်ကောင်းသောမေးခွန်းတိုတောင်းတဲ့စာရင်းထဲမှာဖြစ်ခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည်မည်သည့်နေရာတွင်စတင်ရမည်ကိုမသိပါကအခြားသူများ၏ထောက်ခံချက်များကိုဖတ်ရှု။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့အဘယ်ကြောင့်ဝင်ရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကိုလေ့လာရန်ကြိုးစားပါ။ သင်နှင့်သင့်တော်သောအကြောင်းပြချက်အချို့ကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
အဆိုပါ porn stash ကိုဖျက်မည်။ ဒါကြောင့်အားလုံး။ တိုင်းနောက်ဆုံးဖိုင်ကို။ သင်သည်မည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ porn ပိုင်ဆိုင်လျှင်လည်း, ထိုအမှိုက်ထဲမှာဆမ်းသို့မဟုတ်ပင်ကမီးရှို့ရမည်။
သင့်ရဲ့လူနေမှု space ကို clean up ။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ရမ္မက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်, နှင့်အစီအစဉ်ကမောက်ကမဖြစ်စေရန်သူတို့ကိုလျှော့ချရန်ကူညီပေးနိုင်သည်, သင့်ပရိဘောဂအစီအစဉ်ကိုတက်ပြောင်းလဲပါ။
သတိမရှိသောချော်မှုများနှင့်မတော်တဆထိတွေ့မှုများမှကာကွယ်ရန်ဝက်ဘ်စစ်ထုတ်ကိရိယာတစ်ခုတပ်ဆင်ပါ။ (မှတ်ချက် - ဝက်ဘ်စစ်ထုတ်ခြင်းကသင့်အားပြန်လည်မဖြစ်ပွားစေရန်တားဆီးသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမဟုတ်သင့် - သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရန်မှာသင့်အတွက်သာဖြစ်သည်)
salacious ကြော်ငြာကာကွယ်တားဆီးဖို့ကြော်ငြာ blocker Install လုပ်ပါ။
NoFap's Panic Button ဝက်ဘ် extension ကို Install လုပ်ပါ။ လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုချက်ချင်းသောက်ရန်သင်တိုက်တွန်းနေစဉ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သင့်ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုပြောင်းလဲ သငျသညျအများအားဖြင့်နံနက်ယံ၌ပြန်ဖြစ်ပါက, အစားတစ် ဦး ပြည့်စုံနံနက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုစတင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ပါပဲ။ သင်ပုံမှန်အားဖြင့်အိပ်ရာပေါ်ပြန်ဖြစ်ပါကအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကိုအိပ်ခန်းထဲသို့မသွင်းပါနှင့်။
PMO ဘို့အချိန် / စွမ်းအင် / ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခွင့်မပြုဖို့လိုအပျပါလျှင်သင်တို့လက်ထက်ကာလမှထွက်အချိန်စာရင်း။
အချို့သောသူများကသင်၏ဘရောက်ဇာမှပုံများနှင့်အင်တာနက်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏စမတ်ဖုန်းအား“ စကားမပြောနိုင်သော” လှန်ဖုန်းသို့လဲလှယ်ခြင်းကဲ့သို့ပိုမိုပြင်းထန်သောအပြောင်းအလဲများကိုပင်စဉ်းစားလိမ့်မည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းစွာရောယှက်နေကြသည်ခံရ။ သင်တစ်ဦး reboot ခံယူဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဂရုစိုက်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုကိုစတင်ပါ။ အစ၌တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်အားကစားရုံ၌ကြိုးစားရန်မလိုပါ။ သင်သည်အသေးစားကိုစတင်နိုင်သည်။ မိနစ် ၃၀ လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုပုံမှန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
နည်းနည်းပိုပြီးကျန်းမာစားသုံးခြင်းစတင်ပါ။ တနည်းကား, အသေးကိုစတင်ပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းတစ်ဦးတစ်နေ့လျှင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်, သင်၏အစားအစာကို clean up တစ်ခုစတင်အမှတ်အဖြစ်အသုံးပြုပါ။
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောဘာဝနာ, ယောဂ, နက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူ, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူစကားပြော, ဒါမှမဟုတ်ဆည်းပူးနေအဖြစ်သင့်စိတ်ဖိစီးမှု, သဘောသဘာဝ၌သွားလာစီမံခန့်ခွဲကိုကူညီနိုင်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။
PMO ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ သင်၏ဘဝကိုမလှည့်စားပါနှင့်။
အပြင်ကိုသွား၊ ဘုံ“ ပန်းရောင်ဆင်” ပုံပြင်ကိုစဉ်းစားပါ။ အကယ်လို့တစ်ယောက်ယောက်ကိုပန်းရောင်ဆင်အကြောင်းမစဉ်းစားဖို့ပြောရင်သူတို့ကပန်းရောင်ဆင်အကြောင်းသေချာပေါက်စဉ်းစားမှာပါ။ ဒါဟာ porn နဲ့အတူတူပါပဲ သင်အချိန်ပြည့် PMOing မစဉ်းစားနိုင်ပါ။
PMO မှရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စဉ်းစားခြင်းကသင်၏ ဦး နှောက်အတွင်း၌သင့်အား porn ကိုသတိရစေမည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး porn ပုံရိပ်များပေါ်ပေါက်လာရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ညစ်ညမ်းတဲ့ပုံရိပ်တွေသင့် ဦး နှောက်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းအဲဒီလိုဖြစ်လာမှာပါ။ ညစ်ညမ်းမှုကိုအချိန်အတော်ကြာစဉ်းစားခြင်းသည်သင်၏ဘဝတွင်ညစ်ညမ်းသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုခိုင်မာစေလိမ့်မည်။
PMO ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်သာစဉ်းစားခြင်းမှရှောင်ထွက်ရန်လိုအပ်သည်။ ယခုအီးမေးလ်တွင်ဖော်ပြထားသောအလေ့အကျင့်များကဲ့သို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်သောအပြုသဘောဆောင်သည့်အလေ့အကျင့်အချို့ကိုကောက်ယူရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်၏စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာများနှင့်သင်၏အချိန်ကိုဖြည့်စွက်ရန်စဉ်းစားပါ။ porn မပါဘဲဘဝကသင့်ကိုဘာတွေပေးနိုင်သလဲဆိုတာစူးစမ်းပါ။ တူရိယာတစ်ခုသင်လိုပါသလား။ စာရေးချင်ပါသလား ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုသင်ယူလိုပါသလား? ကျောင်းမှာဒါမှမဟုတ်အလုပ်မှာပိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်ပါသလား။ သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုစလိုက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။
သင်ချက်ချင်းစိတ်ကျေနပ်မှုကျော်နှောင့်နှေးဆန္ဒပြည့်လက်ခံကူညီပေးသည်တဲ့စည်းကမ်းပြည့်လှုပ်ရှားမှုလိုက်စားထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒါကစည်းကမ်းတည်ဆောက်နှင့်များစွာသောကျွမ်းကျင်သူများနှင့်သုတေသနအရသိရသည် PMO မှရမ္မက်ခုခံတွန်းလှန်ရန်သင့် willpower သိုက်တိုးမြှင့်ပေလိမ့်မည်။
PMO ဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏အသက်တာ၌ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲလုပ်နေပါတယ်နှင့်သောပြန်ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှမြှုပ်နှံအာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုငွေပမာဏလိုအပ်သည်။
အဲဒီအစားတစ်ကြိမ်မှာအရာတစည်းဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေ၏ရုံပထမဦးဆုံးမှာသင့်ရဲ့ reboot အပေါ်အာရုံစိုက်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သော porn တစ်ခုအဖြစ်သင်တဦးတည်းအလေ့အထဖြတ်ထံမှထံမှရရှိအဆိုပါစည်းကမ်းနှင့် willpower, အနာဂတျတှငျအခွားသောအလေ့အထများကိုဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အရှိန်အဟုန်တည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်။
လူအချို့က“ စွဲလမ်းမှု၏ဆန့်ကျင်ဘက်သည်sobန္ဒြေစောင့်ခြင်းမဟုတ်၊ ဆက်သွယ်မှုပဲ”
လူမှုရေးမျိုးစိတ်တစ်ခုအနေဖြင့်လူသားများသည်အခြားသူများနှင့်ဆက်နွယ်ရန်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာသည်။ အခြားလူများကသင်၏ဒေသတွင်မရရှိနိုင်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်မည်သို့ရရှိခဲ့သည်။ အခြားသူများသည်ဘဝ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ယခုငါတို့လူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်နေ့စဉ်လူနေမှုမှလျော့နည်းလိုအပ်သောသည်အဘယ်မှာရှိကွဲပြားခြားနားသောကာလ၌နေထိုင်ကြသည်။ ဤလူမျိုးကိုပိုပြီးအထီးကျန်နေကြသည်ကိုဆိုလိုသည်, ဤအထီးကျန်ခံစားချက်တွေကိုဖြစ်နိုင်ဟုနိုင်ပါတယ်။ အထီးကျန်ခြင်း, နှင့်မကြာခဏ-ဆက်စပ်ခံစားချက်ပျင်း, PMO များအတွက်ဘုံအစပျိုးခြင်းဖြစ်ကြသည်။ အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်နှင့်ပိုပြီးလူမှုရေးဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဤခံစားချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲ, ထို့နောက်လည်းသိသိသာသာ PMO မှရမ္မက်လျော့နည်းကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းများ။ မိသားစု။ အဆိုပါဖိုရမ်များ။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကောင်းသော options များဖြစ်ကြသည်။
အနီးကပ်စလစ် (သို့) ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ရုံသာမကဘဲဘာမှမလုပ်ပါနှင့်။ အခြေအနေကနေအပြုသဘောတစ်ခုခုယူပါ။ သင့်အားအဘယ်အရာဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ ထိုအခြေအနေပြန်ဖြစ်ရန်ကန့်သတ်ရန်သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အဆင့်များကိုစဉ်းစားပါ။ အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ပြီးအဲဒါကိုကပ်ပါ။
သူတို့ပျောက်နေစဉ်ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏အခန်းဖော်ကွာဖြစ်ပါသည်, ထိုမဖြစ်နိုင်လျှင်သူတို့ဖြစ်ကြသည်သို့မဟုတ်သောအခါအပယ်သွားလိမ့်စီစဉ်နေချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ် relapsing ကိုရှာဖွေလျှင်, သင်၏ devices တွေကိုပိတ်ပစ်နှင့်အိမ်မှုဝေယျာလုပ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းရဲ့ content စားသုံးပါ။ သင်၏တိုးတက်မှုကိုစာရွက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ခြေရာခံပါ။ မကြာခဏစဉ်းစားပါ။ ဂျာနယ်တစ်ခုရေးပါ နောက်ဆုံးနေ့ရက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ပြီးဆုံးချိန်တွင်သတိပြုပါ၊ ဤအချိန်သည် rebooters အမြောက်အများပြန်ပေါ်လာသည့်အချိန်ဖြစ်သည် (ဤကိစ္စတွင်ရည်မှန်းချက်အသစ်တစ်ခုချမှတ်ရန်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်) ။ မကြာခဏ PMO ဆေးလိပ်ဖြတ်ဘို့သင့်အကြောင်းပြချက်ပြန်လည်သုံးသပ်။
သင်ရှိသည်ဟုမည်မျှပင်ထင်မြင်မိစေကာမူကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ထိုတွင်ရှိခဲ့ဖူးသည်။ အတိတ်ကာလ၌ထိုအရှက်ကွဲခြင်းကိုချန်ထားပါ။ ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်၎င်းကိုလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်သုံးပါ၊ သို့သော်မိမိကိုယ်ကိုမသနားပါနှင့်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းခြင်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပြီးအမုန်းတရားပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။